के श्रद्धाले रोहन श्रेष्ठसँग विवाह गर्न लागेकी हुन् ? – Butwal 24 News
August 29, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on के श्रद्धाले रोहन श्रेष्ठसँग विवाह गर्न लागेकी हुन् ?
मुम्बई : बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुर नेपाली मुलका फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको चर्चा पुरानै हो । गत साल दुवैलाई श्रद्धाको भाइ नाता पर्ने प्रियंक शर्माको विवाहमा माल्दिभ्समा पनि देखिएको थियो । तर, यो हल्ला न श्रद्धाले स्वीकार गरेकी छिन् न रोहनले ।
तर केही दिन अगाडि अचानक दुवैको विवाहको कुरा उठ्यो । श्रद्धाकी काकी अभिनेत्री पदमिनी कोल्हापुरेले र भाइ प्रियंक शर्माले श्रद्धाको विवाहको प्रश्नमा हो भन्ने आसयको जवाफ दिएपछि फेरि एक पटक उनीहरूको विवाहको कुरा सतहमा आएको हो । श्रद्धा र रोहनको विवाह हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा पद्मिनीको जवाफ थियो, ‘म के भनुँ यार । यदि तपाईं मलाई विवाहका लागि कत्तिको उत्सुक हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो जवाफ हुनेछ, ‘एकदमै’ । उनले यदि जोडी मिलेको छ भने झनै राम्रो भन्दै जवाफ दिएकी थिइन् । उता प्रियंक शर्माले पनि उस्तै जवाफ दिएका थिए ।
बच्चादेखिकै साथी श्रद्धा र रोहन अफेयरमा भने केही वर्षअघि मात्र परेको समाचारमा जनाइएको छ । ‘आशिकी २’बाट डेब्यु गरेकी श्रद्धाको नाम यही फिल्मका हिरो आदित्य रोय कपुर र बीचमा फरहान अख्तरसँग जोडिएको थियो । सेलिब्रेटी फोटोग्राफरको परिचय बनाएका रोहन राकेश श्रेष्ठका छोरा हुन् ।